ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်သစ်ဝါဒ new colonialism | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်သစ်ဝါဒ new colonialism
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်သစ်ဝါဒ new colonialism
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 12, 2011 in Think Tank | 1 comment
မြန်မာပြည်မှာ စစ်အစိုးမရပြောတတ်တဲ့ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်သစ်ဝါဒဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အခုသတင်းထဲက ကလင်တန်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှီ အက်ဖ်ဒီအိုင် နိုင်ငံခြားမှ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနေအထားတို့ကို စပ်ဆက်စဉ်းစားမိစေရန်ပါ…..
အာဖရိကတိုက်ရဲ့ သဘာဝ သယံဇာတများကို မိမိတို့နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ ထုတ်ယူအသုံးချ သွားမယ့် ပြည်ပအစိုးရများနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လက်သစ်နယ်ချဲ့ကိုလိုနီဝါဒ ရှိနေကြောင်း ယူအက်စ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟယ်လာရီကလင်တန်က စနေနေ့တွင် သတိပေးပြောဆိုသည်။ ပြည်ပစီမံကိန်း များဟာ အခွင့်ထူးခံလူတစုအတွက် မဖြစ်စေဘဲ တာရှည်ခံပြီး ပြည်သူများအားလုံး အကျိုးခံစားရဖို့ သေချာမှ လက်ခံသင့်ကြောင်း အာဖရိက ခေါင်းဆောင်များအား ပြောသည်။ မတော်မတရား လုပ်နေသူတွေကို ဘယ်သူ ဆိုတာ ထုတ်ဖော်မပြောပေမဲ့ အာဖရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနဲ့ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်များဟာ အာဖရိကတိုက်ပြည်သူများအပေါ် ခေါင်းပုံမြတ်သွေးစုပ် အမြတ်ထုတ်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ စိစစ်ကြပ်မတ်သင့်ကြောင်း အစောပိုင်းတွင်ပြောခဲ့သည်။ အာဖရိကတိုက်ရှိအမေရိကန် သံတမန်များကိုလည်း ၎င်းတို့နေထိုင်ရာနိုင်ငံများရှိ တရုတ်စီမံကိန်းများကို လေ့လာအကဲဖြတ်ဖို့ ညွှန်ကြားထားသည်။
ကိုလိုနီခေတ်ဦးပိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်ပြီး သဘာဝ သယံဇာတတွေကို ယူဆောင်သွားတယ်၊ နယ်ခံခေါင်းဆောင်တွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး လစ်ရုံပဲလို့ ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ မြို့တော်လူစာကာတွင် စနေနေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။ ယူပြီးထွက်သွားတဲ့အခါ အဲဒီမှာကျန်ရစ်သူများအတွက် များများစားစား ချန်မထားခဲ့ဘူး။ အာဖရိကတိုက်မှာ နယ်ချဲ့ကိုလိုနီဝါဒအသစ်ကို ငါတို့ မမြင်မတွေ့လိုပါဘူး။ တရုတ်ပြည်ရယ်လို့ အမည်တပ် မပြောဆိုပေမဲ့ အတူလိုက်ပါသွားတဲ့ အရာရှိများက တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်း အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပ လုပ်ငန်းများ လိုက်နာရတဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေ စံသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ချမှတ်သင့်ကြောင်းဆိုသည်။
ယူအက်စ်အနေနှင့် မည်သည်နိုင်ငံခြား အစိုးရများ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ နစ်နာဆုံးရှုံးလိုစိတ် မရှိကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဒေသခံ လူအဖွဲ့အစည်းများကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ငါတို့ သူတို့အားလုံး အဆင်ပြေ စီးပွားဖြစ်စေလိုသလို ကောင်းကျိုးဆောင်တာများကိုလည်း လုပ်စေချင်သည်။ ၎င်းတို့အနေနဲ့ မှန်ကန်သင့်လျော်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ဖျက်လိုဖျက်စီးလုပ်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး၊ ထိပ်ပိုင်းက အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားတွေနဲ့သာ အပေးအယူလုပ်ဆောင်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် သူတို့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရဖို့၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အခွင့်အလမ်းရဖို့ မကြာခဏ ပေးကမ်းရတာမျိုး မဖြစ်စေလိုပါဘူး။
သူမက အမေရိကန် ဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အပံ့နဲ့ အများပြည်သူ့ စီမံကိန်းများဟာ မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ လာသည်။ အိုဘားမား အစိုးရအနေနဲ့ အာဖရိကတိုက်နဲ့ ပြည်သူလူထုကို စိတ်ဝင်တစားရှိသည်။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ လူတိုင်းရဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွား ဖြစ်သင့်ကြောင်းပြောသည်။ ကလင်တန်သည် ဇင်ဘီယာနိုင်ငံ မြို့တော်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဆောက်လုပ်ပေးသော အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်မှု ကုသရေးဆေးရုံအား ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံအစိုးရထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲတွင် မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့ပြီး HIV/ AIDS ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ၁၅သန်း ရံပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း ကြေငြာချက်ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အစောပိုင်းကပြုလုပ်သော ယူအက်စ်-ဇမ်ဘီယာ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကလင်တန်က အာဖရိကတိုက်ကို ကူညီရန် အမေရိကန် မဟာဗျူဟာကို တင်ပြခဲ့သည်။ ကျွနုပ်တို့အနေနဲ့ ရေရှည်ခိုင်မြဲမယ့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆက်ဆံရေးမျိုးလိုချင်ပါတယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသစ်များကို ဆွဲဆောင်ဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်ဖို့၊ အလုပ်အကိုင်များ ပိုမိုဖန်တီးဖို့ တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ အုတ်မြစ်တခု တည်ဆောက်ချင်သည်၊ အဲဒါတွေသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်စည်မျဉ်းဘောင် ဥပဒေများအတွင်းက ဖြစ်ရပါမည်။ ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူဆောင်ရွက်တာတို့ဟာ စီးပွားလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ဖို့ ဝိရောဓိမဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိထားရန်လိုကြောင်း ပြောသည်။
ကလင်တန်သည် ၁၉၇၆ခုနှစ် ဟင်နရီကစ်ဆင်ဂျင်၏ ခရီးစဉ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတဦး၏ အလည်အပတ် ခရီးဖြစ်သည်။ ဇမ်ဘီယာခရီးစဉ်အပြီးတွင် ကလင်တန်သည် ကုန်သွယ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အမျိုးသမီးကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေး ရည်ရွယ်သည့် အာဖရိကတိုက် သုံးနိုင်ငံခရီးစဉ်၏ ဒုတိယခရီးတထောက်အဖြစ် တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံသို့ လေယာဉ်ပျံဖြင့် ထွက်ခွာသွားသည်။ ကလင်တန်သည် ယူအေအီးနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သော လစ်ဗျားအရေး နိုင်ငံတကာ ညီလာခံသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံသို ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံမှအပြန် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသို့ ခရီးဆက်ပြီး ဝါရှင်တန်သို့ နောက်တပတ်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Clinton warns Africa of ‘new colonialism’
By MATTHEW LEE, Associated Press – Sat Jun 11
DAR ES SALAAM, Tanzania – U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton on Saturday warned ofacreeping “new colonialism” in Africa from foreign investors and governments interested only in extracting natural resources to enrich themselves.
Clinton did not identify any perceived culprits, butaday earlier she had urged scrutiny of China’s large investments and business interests in Africa so that the African people are not taken advantage of. She said U.S. diplomats in Africa had been asked to provide Washington with assessments of Chinese projects in the countries to which they are assigned.
“We saw that during colonial times, it is easy to come in, take out natural resources, pay off leaders and leave,” Clinton said Saturday in the Zambian capital of Lusaka before flying to Tanzania. “And when you leave, you don’t leave much behind for the people who are there. We don’t want to seeanew colonialism in Africa.”
Although she didn’t mention China by name, officials traveling with Clinton said she wanted to stress that African countries should hold Chinese investors to the same standards that they apply to Americans and Europeans.
Clinton said the United States didn’t want any foreign governments or investors to fail in Africa, but wanted to make sure that they give back to local communities.
Clinton said that American development aid and public works projects come with good governance conditions and that the Obama administration is interested in Africa and its people. Their success, she said, is in everyone’s long-term interest.
Clinton was the first secretary of state to visit Zambia since Henry Kissinger came in 1976 to lay out the Ford administration’s policy for southern Africa as revolts against white minority rule in South Africa and what was then Rhodesia were intensifying.
ခေါင်းစဉ်နဲ.သတင်းနဲ.ကတော့လိုက်ဖက်ပါ့ဗျာ…နောက်ထပ်ဒီလိုသတင်းလေးတွေ ဗဟုသုတရစေမယ့်သတင်း များကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုလျှက်ပါ ကို ကြောင်ကြီးရေ…………